Iiputhi zeTiacup ziyathengiswa-iTiacup Tiny, Toy, Miniuppies
Iiputhi zeTiacup ziyathengiswa, iiTeacup kunye neePuppies ezincinci zokuthathwa kunye nokuhlangulwa
Iiputhi zeTiacup ziyathengiswa, zamkelwe kwaye zihlangulwe
I-Inshurensi yesilwanyana sakho seNja okanye ekati
I-Teacup Chihuahuas yokuthengisa, ukuhlangula, ukwamkelwa
Iintsana ezincinci zeNtengiso ziyathengiswa, ukuhlangula, ukwamkelwa
I-Cockapoo Puppies iyathengiswa, ukuhlangula, ukwamkelwa
Iipabhu zeLabradoodle ziyathengiswa, ukuhlangulwa, ukwamkelwa
Iipuppies zexabiso eliphantsi ziyathengiswa, ukuhlangula, ukwamkelwa
Iimbaza zeMorkie ziyathengiswa, ukuhlangula, ukwamkelwa
Ihotele ezinobubele kwiNdawo yokuphumla
Ukufuya izinja okuQalwa ngo-A
Ukufuya kwenja okuQalwa nge-B
Iibhugi zoKuhlangulwa, iBhlog yeAdoption
Iipuppies zeTeacup eAlabama
Iintsana zeTiacup eAlaska
Iintsana zeTiacup eArizona
Iintsana zeTiacup eCarlifonia
Iintsana zeTiacup eColorado
Iiputhi zeTeacup eConnecticut
Iintsana zeTiacup eDelaware
Iintsana zeTiacup eFlorida
Iintsana zeTiacup eGeorgia
Iintsana zeTiacup eHawaii
Teipup Puppies eIdaho
Iintsana zeTiacup eIllinois
Iintsana zeTiacup eIndiana
Iintsana zeTiacup eIowa
Iintsana zeTeacup eKansas
Iintsana zeTiacup eKentucky
Iintsana zeTiacup eLouisiana
Iintsana zeTiacup eMaine
Iintsana zeTiacup eMaryland
Iintsana zeTiacup eMassachusetts
Iintsana zeTiacup eMichigan
Iintsana zeTiacup eMinnesota
Iintsana zeTiacup eMississippi
Iintsana zeTiacup eMissouri
Iintsana zeTiacup eMontana
Iintsana zeTiacup eNebraska
Iintsana zeTiacup eNevada
Iintsana zeTiacup eNew Hampshire
Iintsana zeTiacup eNew Jersey
Iintsana zeTiacup eNew Mexico
Iintsana zeTiacup eNew York
Iintsana zeTiacup eMantla Carolina
IiTuacup Puppies eMantla Dakota
Iintsana zeTiacup eOhio
Iintsana zeTiacup e-Oklahoma
Iintsana zeTiacup eOregon
IiTuacup Puppies ePennsylvania
Iintsana zeTiacup kwisiqithi saseRhode
Iintsana zeTiacup eSouth Carolina
IiTuacup Puppies eSouth Dakota
Iintsana zeTiacup eTennessee
Iintsana zeTiacup eTexas
Iintsana zeTeacup e-Utah
Iintsana zeTiacup eVermont
Iintsana zeTiacup eVirginia
Iintsana zeTiacup eWashington
Iintsana zeTiacup eWest Virginia
Iintsana zeTiacup eWisconsin
Iintsana zeTiacup kwiWyning
Chwetheza ukukhangela kwakho
Iiputhi zeTiacup ziyathengiswa, i-Teacup, ithoyizi elincinci kunye neenciniba ezincinci zokuthathwa kunye nokuhlangulwa kuzo zonke iindawo ezingama-50. Kubandakanya iYuropaie, Chihuahua, Morkie, Malta, Poodle, Labradoodle, Cockapoo, Maltipoo, Pomeranian, Shih Tzu, Blue Sable French Bulldog, Heeler, Chow Chow Inja kunye nokunye. Apha ngezantsi uyakufumana iindawo zokuZala ezininzi ezincinci zeTeacup, Miniature, kunye neMini yeZinja. Siqukelele ulwazi oluninzi ukukunceda ekukhangelo kwakho kwiqabane elifanelekileyo losapho lwakho.
Iipuppies zeTeacup ziyathengiswa eAlabama AL
Iiputhi zeTiacup kunye neeNja zokuTshintshelwa kunye nokuHanjiswa kwabazalisi beNja kunye nemibutho yohlangulo eAlabama, AL.
Ezi zinja zincinci, kodwa zinobuntu obumnandi kakhulu. Isiza esise-Yorkshire Terrier singakhwela esikhwameni kwaye senze inja efanelekileyo yemikhono. Zikhonkotha ngengxolo enkulu kwaye zingaphila iminyaka eli-12 ukuya kweli-15. Ubungakanani buyahluka kodwa ii-2-5 lbs zimalunga nobungakanani betiacup.
Iiputhi zeTiacup ziyathengiswa eAlaska AK
Iiputhi zeTiacup kunye neeNja zokuTshintshelwa kunye nokuHanjiswa kwabazalisi beNja kunye nemibutho yohlangulo eAlaska, AK.
I-teacup encinci yeChihuahua inja encinci. Banokuba lincinci njenge-2 ukuya kwi-4 lbs kwaye zithathwa njenge-teacup. Zikholisa ukubhula ngaphezulu kunolunye uhlobo kwaye inokuba yinja yomntu omnye. Uninzi luthanda ukuba cuddle kwaye lwenze izinja ezinkulu zamanqina. Nxibelelana nabo nosapho lonke kwakamsinya ukuba kunokwenzeka. Imibala ibandakanya mnyama, mhlophe, fawn, ukhilimu, itshokholethi, igolide kunye nezinye izinto ezininzi ezahlukeneyo kubandakanya ukudityaniswa kwaye oku kuzalwa kuza neendidi zeenwele ezinde nezinwele ezimfutshane.
Iiputhi zeTiacup ziyathengiswa eArizona AZ
Iintsana zoThwaja kunye neeNja zokuLamkelwa kunye nokuHanjiswa kwabazalisi bezinja kunye nemibutho yohlangulo eArizona, AZ.
I-teacup Pom yinja encinci, esebenzayo kunye nexabisekileyo. Zijongeka zinobunzima phakathi kwe-2 ukuya kwi-5 lbs ukuba ithathwe njengobungakanani be teacup. Beza ngemibala eyahlukeneyo kubandakanya obomvu, orenji, mhlophe okanye ukhilimu, luhlaza, bumdaka, mnyama mnyama abanye befomathiweyo. Zingumtsalane, zinobuhlobo kwaye zifuna umthambo njengazo zonke iintlobo zokuzala.
Iipuppies ze-Teacup ziyathengiswa e-Arizona
Iintsana eziTiacup kunye neeNja zokuTshintshelwa kunye nokuHanjiswa kwabazalisi beNja kunye nemibutho yohlangulo eArkansas, AR.
Olu hlobo lokuzalwa luluhlobo olungekho semthethweni lwePoodle. Ikwabizwa ngokuba yiToy Poodle. Bazenza izihlobo ezikhulu zababantu kunye neentsapho. Unobukrelekrele, unothando, unyanisekile kunye noluntu. Beza ngemibala emininzi kubandakanya mnyama, isilivere, luhlaza, grey, apricot, beige, brown, red and white. Zidla ngokuba zi-intshi ezili-10 okanye ezincinci, kwaye zibe ngaphantsi kweepawundi ezinobunzima obuthathwa njenge-teacup okanye ubungakanani bento yokudlala.
Iintsana zeTiacup ziyathengiswa eCarlifonia CA
Iintsana zoThwaja kunye neeNja zokuLamkelwa kunye nokuHanjiswa kwabazalisi bezinja kunye nemibutho yohlangulo eCalifornia, CA.
I-teacup Malta ligama elinikwe ubukhulu obuncinci kohlobo oluvele lukhona lwe mini. Bayadlala kwaye bagcwele amandla kude kube lixesha lokuphumla. Olu hlobo lwenja lwenza inja enkulu yomlenze kwaye ungabathwala esikhwameni sakho ukuba incinci ngokwaneleyo. Bahlala kamnandi eflethini kodwa khumbula yonke inzala ifuna ukuzivocavoca. Imalathi ye teacup ithande ukuba phakathi kwe 2 ne 4 lbs.
Iintsana zeTiacup ziyathengiswa eColorado CO
Iiputhi zeTiacup kunye neNja yeZinja kunye noFakelo oluvela kwaBufuyi bezinja kunye nemibutho yohlangulo eColorado, CO.
Le nja yomyili we-hybrid ivela ngokuzala i-Poodle kunye neMalta. I-teacup Maltipoo ithambile kwaye inothando, yaziwa ngokuba zinja ezinkulu zosapho kwaye inokuqeqeshwa ukuba izinja zonyango ngenxa yendlela emnandi ngayo. Imibala ibandakanya isilivere, emnyama, emhlophe, khrimu emnyama, grey, mibala emdaka kunye nokunye. Uqikelelo lwee-intshi ezi-8 ukuya kwezi-14 ubude kunye nee-5 ukuya kwezi-15 iilbs ngokubanzi zithathwa njengobungakanani betiacup.
Iintsana zeTiacup ziyathengiswa eConnecticut CT
Iiputhi zeTiacup kunye neeNja zokuTshintshelwa kunye nokuHanjiswa kwabazalisi beNja kunye nemibutho yohlangulo e-Connecticut, kwi-C.
Olu hlobo lincinci lokufuya lithande ukuba nobunzima phantsi kwe-7 lbs kuthathwa njengobungakanani be-teacup. Zihlala zilungiswe kakuhle kwaye ziyakuthanda ukudlala nokuzonwabisa. Banomdla kwaye bayalumkisa kodwa bakwenzela iikati okanye iikati zezinja ezinkulu. Imibala ibandakanya okumhlophe, ityuwa kunye nepelepele, mnyama ngombala omhlophe, isilivere yeplatinam, ipepile yesibindi, umnyama nesilivere, itshokholethi okanye isibindi nezinye ezininzi. Olu hlobo lokufuya oluncinci lufuna ukuzilolonga kunye nokunakekelwa kwezilwanyana ngokufanelekileyo ukuze uphile ubomi obude beminyaka eli-12-14.
Iiputhi Teacup Zithengiswa eDelaware DE
Iintsana Zokufunda ukubambisa kunye nokuhlangula kwaBufuyi bezinja kunye nemibutho yohlangulo eDelaware, DE.
I-Morkie ngumyili okanye i-hybrid eyadalwa ngokuzalela iMalta kunye neYorkshire Terrier. Ngazo zozibini iimveliso zobungakanani bento yokudlala, ingxelo ye teacup ivela ngokuzala abazali abancinci. Ubungakanani bomsindo buba zi-3 ukuya kwezi-5 iilbs. Benza izinja ezinkulu zemikhono kwaye bathande ukudlala kwaye bajikeleze. Ilungele abantwana kunye neentsapho ukubonelela ukuba baphile kakuhle ekuzalweni. Eminye imibala ibandakanya mnyama, omdaka, omnyama nomhlophe, igolide emnyama kunye negolide. Encinci ngokwaneleyo ukuba ingathwala isikhwama semali kwaye idlala ngokwaneleyo ukuhamba kancinci.
Iiputhi zeTiacup ziyathengiswa eFlorida FL
Iiputhi zeTiacup kunye neeNja zokuTshintshelwa kunye nokuHanjiswa kwabazalisi bezinja kunye nemibutho yohlangulo eFlorida, FL.
Teacup isiFrentshi saseBulldog
Oluhlobo oluncinci luhlala lufumana ixesha le teacup ngokuba kwinqanaba le-10-14 lb. Umphakamo ujikeleze i-11-12 inches. I-Frenchie inesidima kwaye inokuba nenkani kodwa uninzi lufuna ukuthanda kunye nokuthandwa. Beza ngemibala emininzi kubandakanya i-lilac enqabileyo, itshokholethi, eluhlaza okwesibhakabhaka kunye ne-fawn, emnyama, ebonakalayo, eluhlaza, emnyama kunye ne-tan nokunye. Luhlobo oluhle olufuna ukuzilolonga imihla ngemihla. Ukuhamba kufutshane epakini okanye ukudlala ukulanda endlwini ziimibono ezintle. Bayakuthanda ukuhlafuna amathoyizi kwaye njengalo naluphi na uhlobo lokuzalela, kufuneka utyelele ugqirha wakho rhoqo ngenyanga ukuze ahlolwe.
Iintsana zeTiacup ziyathengiswa eGeorgia GA
Iintsana zoThwaja kunye neeNja zokuLamkelwa kunye nokuHanjiswa kwabazalisi bezinja kunye nemibutho yohlangulo eGeorgia, GA.
Iiputhi Teacup Zithengiswa eHawaii HI
Iiputhi zeTiacup kunye neNja yeZinja kunye nohlangulo olusuka kwaBufuyi bezinja kunye nemibutho yohlangulo eHawaii, HI.
Teupup Puppies for sale in Idaho ID
Iintsana Zokufunda ukubambisa kunye nokuhlangula kwiBujaja beZinja kunye nemibutho yohlangulo eIdaho, i-ID.
Iipuppies zeTeacup zithengiswa eIllinois IL
Iintsana zoThwaja kunye neeNja zokuLamkelwa kunye nokuHanjiswa kwabazalisi bezinja kunye nemibutho yohlangulo eIllinois, IL.
Iipuppies zeTeacup zithengiswa eIndiana IN
Iiputhi zeTiacup kunye neeNja zokuTshintshelwa kunye nokuHanjiswa kwabazalisi beNja kunye nemibutho yohlangulo eIndiana, IN.
Iipuppies zeTeacup ziyathengiswa eIowa IA
Iintsana zoThwaja kunye neeNja zokuTshintshwa kunye nokuHanjiswa kwabazalisi beNja kunye nemibutho yohlangulo eIowa, IA.
Teupup Puppies ezithengiswayo eKansas KS
Iiputhi zeTiacup kunye neeNja zokuTshintshelwa kunye nokuHanjiswa kwabazalisi beNja kunye nemibutho yohlangulo eKansas, KS.
Iipuppies zeTeacup ziyathengiswa eKentucky KY
Iintsana zoThwaja kunye neeNja zokuMkelwa kwakhona kunye nokuHanjiswa kwabazalisi bezinja kunye nemibutho yohlangulo eKentucky, KY.
Iipuppies zeTeacup ziyathengiswa eLouisiana LA
Iintsana Zokufunda ukubambisa kunye nokuhlangula kwizinja zezinja kunye nemibutho yohlangulo eLouisiana, LA.
Iipuppies zeTiacup zithengiswa eMaine ME
Iintsana zokufunda ukubambisa kunye nokuhlangula izinja kwabahlanguli kunye nemibutho yokuhlangula eMaine, ME.
Iipuppies zeTeacup ziyathengiswa eMaryland MD
Iintsana Zokufunda ukubambisa kunye nokuhlangula kwiZinja zabaNja kunye nemibutho yohlangulo eMaryland, MD.
Teupup Puppies ezithengiswayo eMassachusetts MA
Iintsana zoTata kunye neeNja zokuMkelwa kwakhona kunye nokuHanjiswa kwabazalisi bezinja kunye nemibutho yohlangulo eMassachusetts, MA.
Iintsana zeTiacup ziyathengiswa eMichigan MI
Iintsana zoThwaja kunye neeNja zokuLamkelwa kunye nokuHanjiswa kwabazalisi bezinja kunye nemibutho yohlangulo eMichigan, MI.
Teupup Puppies ezithengiswayo eMinnesota MN
Iintsana zoThwaja kunye neeNja zokuLamkelwa kunye nokuHanjiswa kwabazalisi bezinja kunye nemibutho yohlangulo eMinnesota, MN.
Iiputhi zeTiacup ziyathengiswa eMississippi MS
Iintsana eziThungayo kunye neeNja zokuTshintshelwa kunye nokuHanjiswa kwabazalisi beNja kunye nemibutho yohlangulo eMississippi, MS.
Iintsana zeTiacup ziyathengiswa eMissouri MO
Iintsana zoThwaja kunye neeNja zokuLamkelwa kunye nokuHanjiswa kwabazalisi bezinja kunye nemibutho yohlangulo eMissouri, MO.
Teupup Puppies ezithengiswayo eMontana MT
Iintsana zoThwaja kunye neeNja zokuLamkelwa kunye nokuHanjiswa kwabazalisi bezinja kunye nemibutho yohlangulo eMontana, MT.
Iipuppies zeTeacup ziyathengiswa eNebraska NE
Iintsana zokufunda ukubambisa izinja kunye nokuhlangulwa kwezinja kunye nokuhlangulwa kwabazalisi bezinja kunye nemibutho yohlangulo eNebraska, NE.
Iipuppies zeTeacup ziyathengiswa eNevada NV
Iintsana eziThungayo kunye neeNja zokuTshintshwa kunye nokuHanjiswa kwabazalisi beNja kunye nemibutho yohlangulo eNevada, NV.
Iipuppies zeTeacup ziyathengiswa eNew Hampshire NH
Iiputhi zeTiacup kunye neeNja zokuTshintshelwa kunye nokuFunyanwa kwaBufuyi bezinja kunye nemibutho yohlangulo eNew Hampshire, NH.
Iipuppies zeTeacup ziyathengiswa eNew Jersey NJ
Iiputhi zeTiacup kunye neeNja zokuTshintshelwa kunye nokuHanjiswa kwabazalisi beNja kunye nemibutho yohlangulo eNew Jersey, NJ.
Iintsana zeTiacup ziyathengiswa eNew Mexico NM
Iintsana zoThwaja kunye neeNja zokuLamkelwa kunye nokuHanjiswa kwabazalisi bezinja kunye nemibutho yohlangulo eNew Mexico, NM.
Iintsana zeTiacup ziyathengiswa eNew York NY
Iintsana zoThwaja kunye neeNja zokuLamkelwa kunye nokuHanjiswa kwabazalisi bezinja kunye nemibutho yohlangulo eNew York, NY.
Iipuppies zeTeacup ziyathengiswa eNorth Carolina NC
Iintsana zoThwaja kunye neeNja zokuLamkelwa kunye nokuHanjiswa kwabazalisi bezinja kunye nemibutho yohlangulo eNyakatho ye-Carolina, kwi-NC.
Iintsana zeTiacup ziyathengiswa eNyakatho Dakota ND
Iintsana zoTata kunye neeNja zokuMkelwa kwakhona kunye nokuHanjiswa kwabazalisi bezinja kunye nemibutho yohlangulo eMantla Dakota, ND.
Iiputhi zeTiacup ziyathengiswa eOhio OH
Iintsana zoThwaja kunye neeNja zokuLamkelwa kunye nokuHanjiswa kwabazalisi bezinja kunye nemibutho yohlangulo eOhio, OH.
Iipuppies ze-Teacup ziyathengiswa e-Oklahoma Kulungile
Iintsana zoThwaja kunye neeNja zokuMkelwa kwakhona kunye nokuHanjiswa kwabazalisi bezinja kunye nemibutho yohlangulo e-Oklahoma, kulungile.
Iipuppies ze-Teacup ziyathengiswa e-Oregon OKANYE
Iintsana zoThwaja kunye neeNja zokuLamkelwa kunye nokuHanjiswa kwabazalisi bezinja kunye nemibutho yohlangulo e-Oregon, OKANYE.
Iintsana zeTiacup ziyathengiswa ePennsylvania PA
Iintsana zoThwaja kunye neeNja zokuLamkelwa kunye nokuHanjiswa kwabazalisi bezinja kunye nemibutho yohlangulo ePennsylvania, PA.
Iintsana zeTiacup ziyathengiswa eRhode Island RI
Iintsana zoThwaja kunye neeNja zokuMkelwa komzimba kunye nokuHanjiswa kwabazalisi bezinja kunye nemibutho yohlangulo eRhode Island, RI.
Iintsana zeTiacup ziyathengiswa eSouth Carolina SC
Iintsana zoThwaja kunye neeNja zokuLamkelwa kunye nokuHanjiswa kwabazalisi bezinja kunye nemibutho yohlangulo eSouth Carolina, SC.
Iintsana zoThwaja kunye neeNja zokuLamkelwa kunye nokuHanjiswa kwabazalisi bezinja kunye nemibutho yohlangulo eMzantsi Dakota, SD.
Iintsana zeTiacup ziyathengiswa eTennessee TN
Iintsana zoThwaja kunye neeNja zokuLamkelwa kunye nokuHanjiswa kwabazalisi bezinja kunye nemibutho yohlangulo eTennessee, TN.
Iintsana zeTiacup ziyathengiswa eTexas TX
Iintsana zoThwaja kunye neeNja zokuLamkelwa kunye nokuHanjiswa kwabazalisi bezinja kunye nemibutho yohlangulo eTexas, TX.
Iipuppies ze-Teacup ziyathengiswa e-Utah UT
Iintsana ezinamacebiso kunye nezinja zokuthathwa komtshato kunye nokuhlangulwa kwabazalisi bezinja kunye nemibutho yohlangulo e-Utah, UT.
Iintsana zeTiacup ziyathengiswa eVermont VT
Iiputhi zeTiacup kunye neeNja zokuTshintshelwa kunye nokuHanjiswa kwabazalisi beNja kunye nemibutho yohlangulo eVermont, VT.
Iiputhi zeTiacup ziyathengiswa eVirginia VA
Iintsana zoThwaja kunye neeNja zokuLamkelwa kunye nokuHanjiswa kwabazalisi bezinja kunye nemibutho yohlangulo eVirginia, VA.
Iintsana zeTiacup ziyathengiswa eWashington WA
Teacup Puppies and Dogs for Adoption and Rescue from Inja yaBazalisi beNja kunye nemibutho yohlangulo eWashington, WA.
Iintsana zeTiacup ziyathengiswa eWest Virginia WV
Iintsana zoThwaja kunye neeNja zokuLamkelwa kunye nokuHanjiswa kwabazalisi bezinja kunye nemibutho yohlangulo eNtshona Virginia, WV.
Iintsana zeTiacup ziyathengiswa eWisconsin WI
Iiputhi zeTiacup kunye neeNja zokuTshintshelwa kunye nokuHanjiswa kwabazalisi beNja kunye nemibutho yohlangulo eWisconsin, WI.
Iipuppies zeTeacup ziyathengiswa eWyWy
Iiputhi zeTiacup kunye neeNja zokuTshintshelwa kunye nokuHanjiswa kwabazalisi beNja kunye nemibutho yohlangulo eWyoming, WY.
Yintoni eyenza umdlwana we teacup?
Njengoko kubonisiwe yiAmerican Kennel Club, ii-canines zinokuthathwa njenge- “teacup” kwimeko apho zinokuphakama khona kwindawo ezo kuluhlu lweepawundi ezintlanu kunye nesihlanu, kwaye zilinganise ngaphantsi kwe-intshi ezili-17 xa zikhule ngokupheleleyo.
Ngaphaya koko, iintlobo zento yokudlala “ezinto yokudlala” zibandakanya nayiphi na i-canines enobunzima obungaphantsi kweepawundi ezili-15, ke ke iipokethi zetyhefu zinokujongwa njengeyona nto iphambili kulungiselelo "lwento yokudlala", ngokunjalo
Ziphila kangakanani iinciniba zomntwana?
Kwithuba elifanelekileyo lokuba wenze uphando lwakho ngempumelelo ukuze ufumane i-teacup yakho, unokuphelisa umanyano kangangeminyaka eli-15.
Ii-canr ezincinci ziya kwenza, ngokubanzi, ziphile ixesha elide kuneemfuyo ezinkulu, kwaye ngalo lonke ixesha unikwa olona nyango lufanelekileyo, i-teacup doggy yakho ingakhokelela ubomi obude, obonwabisayo.
Ixabisa malini izinja ezincinci?
Ngenxa yoko, ezi thanyana zibizwa ngokuba “zii-teacups” kwaye zihlala zithengiswa ngexabiso elinamandla.
Yimalini i-teacup encinci ebiza malini?
Iindleko zohlobo lwe-teacup puppy lunokubaleka ngaphandle kwendawo nayiphi na indawo kuluhlu lwe- $ 750 kunye ne- $ 2,000!
Ngaba kuya kufuneka uhambe iintsana?
Ukuhamba ngeenja encinci ye-teacup kubaluleke njengokuhambahamba kolunye uhlobo lwe-canine.
Eyona njongo isisiseko yalo mntwana mncinci nangona yonke into ifuna usuku ngenxalenye yomoya yangaphandle.
Ngelixa ukuhamba kuye kungenakuthelekiswa nokuhambahamba kwe-pooch enkulu, kusafuneka.
Yeyiphi eyona ntombazana icekeceke ebalaseleyo?
Nokuba ungakanani (Teacup, Toy, Standard, Giant), uhlobo lwePoodle aluzibi ukuba yenye yezona ntlobo zeembongi zihambahamba emhlabeni namhlanje.
Ngaba zibaluleke kangakanani izinja zentombazana?
Ngokungacwangciswanga, injana yecuba yipodoki ekuyo nayiphi na imeko unyaka woku-1 kunye nemilinganiselo nge-intshi ezili-17 okanye ngaphantsi.
Benza ubukhulu becala iipesile ezi-4 okanye ngaphantsi kophuhliso.
Nangona kunjalo, akukho bukhulu obufunekayo kuba amantshontsho e-teacup ayisiyo indlela eyahlukileyo okanye yohlobo lwegunya.
Zifuna ntoni izinja ezincinci?
Izinja ezisencinci kufuneka zikhuthazwe ukuba zitye rhoqo kubutyebi befayibha.
Khangela ukutya okotyiweyo okanye okomileyo okuqulethe izilungiso ezinjengamaqanda, inkukhu, iimveliso zendalo, iVewggies, kunye ne-omega 3 yamafutha angasebenziyo.
Ngokunjalo, qinisekisa isondlo esivela kwi-pooch oyikhethileyo iqulethe isiraphu yeKaro.
I-Teacup young aggies ityekele kwi-glucose ephantsi kwaye oku kulungiswa kunganceda ukulungelelanisa oko.
Ngaba iintsana ezi-teacup zikhonkotha kakhulu?
Thatha i-gander kumnini wamalungelo abantu, kwaye uya kufumanisa umthombo wolungiso okhuthaze i-canacup canine encinci ukuba ikhonkotha into enkulu ngezizathu ukuba ayizizo zonke iimveku teacup ezikhonkotha itoni.
Abantu abambalwa babetha isikhonkwane entloko-ayisiyonto yokuzala, okanye ubungakanani be-canine.
Kwithuba elifanelekileyo lokuba kufuneka ube nenciniba ezolileyo, ezolileyo, bagcine bethe cwaka kwaye bahlala.
Yeyiphi i-canine encinci ekungekho lula kuyo ukuba yaphuke?
Amancinci amancinci kuneeSchnauzers eziqhelekileyo zezinye zezona zincinci ze-pooch ezingazinzanga ekusetyenzisweni kwendlu.
Iinja ezimbalwa ezincinci ziya kuthi zibanjelwe endlwini xa zishiya ikhaya labazalisi, ngokucacileyo, kwimeko apho utshintsha indlela yokulungiselela (usebenzisa imingxunya endaweni yengca, umzekelo) iyakuthintela i-pooch kancinci.
Ngenxa yezinja ezincinci ezisencinci, iincinci ezincinci kunye nobuchule obuphakamileyo bokutshisa iikhalori, amathole afanelekileyo kunye ne-teacup kufuneka atye ngaphezulu kwamaxesha ambalwa ngosuku.
Kuya kufuneka batye rhoqo emva kweeyure ezi-4 ukuya kwezi-5, EMVA kokugqibela kunye nezinye iinjana ezisencinci. Kufuneka batye rhoqo kwiiyure ezi-3-4.
Zingaphi iintlobo zeenganyana ezinje?
Ukusukela ukuba inzala yeTiacup ayimlingani ngqo umgangatho we-AKC wohlobo lokuzala, eneneni, unokufumana naluphi na uhlobo olubizwa ngokuba yi-teacup.
Eyona nto icekeceke kakhulu kwaba bafundi icekeceke njengeTeacup yipokotho enobunzima obungaphantsi kweepawundi ezi-4 kwaye ime ngaphantsi kwe-17 inches.
Ngala mabhentshi, kukho iindlela ezi-6 zenyani zeTeacup.
Umondla ngantoni umntwana we-teacup?
Iintsana ezincinci kufuneka zikhuthazwe ngokutya rhoqo kusisityebi kwifayibre.
Khangela ukutya okotyiweyo okanye okomileyo okuqulethe ukulungiswa njengamaqanda, inkukhu, iimveliso zezinto eziphilayo, iivenisi kunye nee omega 3 ezingasasetyenziswayo.
Ukongeza, qinisekisa isondlo esine-canine oyikhethileyo iqulethe isiraphu yeKaro.
Iintsana zokuthambisa zithambekele kwiglucose esezantsi kwaye oku kulungiswa kunganceda ukulungelelanisa oko.
Ngeli xesha abalimi abaninzi bezinja, abagcini kunye neendawo zokufihla intloko baya kuthumela kula mazwe alandelayo: IAlabama AL -Alaska AK - Arizona AZ - IArizona - I-California CA - I-Coladoado CO - I-Connecticut CT - Delaware DE - eFlorida FL - Georgia GA - eHawaii HI - Idaho ID - Illinois IL - Indiana e-Iowa IA - Kansas KS - Kentucky KY - Louisiana LA - Maine ME - Maryland MD - Massachusetts MA - Michigan MI - Minnesota MN - Mississippi MS - Missouri MO - Montana MT - Nebraska NE - Nevada NV -I-New Hampshire NH - New Jersey NJ - New Mexico NM - New York NY - North Carolina NC-North Dakota ND - Ohio OH - Oklahoma OK - Oregon OR - Pennsylvania PA - Rhode Island RI - South Carolina SC - South Dakota SD - Tennessee I-TN-Texas TX - Utah UT - Vermont VT - uVirginia VA - eWashington, Washington, DC - eWest Virginia WV - eWisconsin WI - eWyoming WY - Uxolo asilothumeli eHawaii HI.
Ingulube ye Teacup,
I-Teacup Chinese Crested,
Teacup Miniature Izikhonkwane,
Teacup IsiNgesi Cocker Spaniel,
Teacup Pembroke I-Welsh Corgi,
Teacup iScotch Terrier,
I-Teacup West Highland White White Terrier,
Teacup IsiNgesi Bulldog,
Ubuncinci beMelika Ukuxhaphaza abanye,
UMalusi oMncinci wase-Australia,
I-Miniature Olde i-Bulldogge yesiNgesi,
Umalusi omncinci waseJamani,
Ubuncinci beBorder Collie,
Ubuncinci beFrench Bulldog,
Ubuncinci besiNgesi iBulldog,
I-Miniature Lhasa Apso,
I-Miniature Bichon Frize,
Miniature Cavalier uKumkani uCharles Spaniel,
Ubuncinci bebrussels Griffon,
Isithambisi esincinci Miniature,
I-Miniature Alaskan Klee Kai,
Ubuncinci beJapan Chin,
I-Miniature yesiNgesi i-Cocker Spaniel,
I-Miniature Pembroke I-Welsh Corgi,
Isithambisi esincinci seScotland,
I-Miniature West Highland White White Terrier,
Imilambo emincinci yaseBrussels
Isithambisi esincinci Mini,
IMini yamaJaphane yaseChin,
Isikali esincinci seMini,
Imvu yaseShetland Sheepdog,
IMini West Nxweme eNtsha eNqaba,
Olu lwazi lungasentla kukukunceda ukuba uthathe isigqibo sokuba yeyiphi inkuku yokulusa inja, ukuhlangula inja okanye indawo ekhuselekileyo yeyona ilungele wena & nosapho. Asidibani namntu odwelisiweyo ngoko kubaluleke kakhulu ukuba wenze olwakho uphando kwaye uqiniseke ukuba lulungelele wena nosapho lwakho.
Inqaku elibalulekileyo kuGoogle, Yahoo, Bing kunye nezinye iiinjini zokuKhangela:
Olu luhlu lubekwe mahala simahla & yenzelwe ulwazi kuphela kwaye azinxibelelanisi.
NCEDA UQAPHELE: Lumkela ii-Scams ezikucela ukuba uthumele imali ngumanyano lwasentshona, iigram zemali okanye uWal-Mart kuWal-Mart. Ingcebiso yam kukuba uthathe inja yakho emntwini kwaye uhlawule emva koko. Hlala uhlangana kwindawo kawonkewonke kwaye ungaze uwedwa. Ukuba uthatha isigqibo sokudlalwa ngenqanawa ndacebisa uPayPal okanye ukuba uhlawula xa kuziswa intshontsho.
Guqula iphepha kwilwimi lakho
Uyenza njani iMaski yoBuso
Ungayenza njani iSanitizer Yezandla
Teacup Shih Tzu Iipuppies zentengiso, i-Adoption
I-Cockapoo Puppies yeeNtengiso, i-Adoption
Iilebhu zeLabradoodle ziyathengiswa, ziyakwamkelwa
Iintsana ezincinci zeNtengiso ziyathengiswa, ziyamkelwa
Iiputhi zeTiacup ziyathengiswa kunye nokwamkelwa
© I-copyright-Umxholo we-OceanWP nguNick